Umzimba Ubuncwane bamanzi 0.0709 mg / mL
Aukuguquka I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder esetyenziswe njengesilwanyana esilwa ne-anti-obesity. Inendima njengesondlo esinxilisayo kunye ne-agonist ye-serotonergic.
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder (856681-05-5) Indlela yokusebenza
I-Lorcaserin hydrochloride i-hemihydrate powder isetyenziselwa ukunyanga ukulawulwa kobunzima obungapheliyo kubantu abadala abane-index ye-mass mass (BMI) ye-30 okanye enkulu (obomkhulu) njengongezwa kwindlela yokutya yokunciphisa i-calorie kunye nokuzivocavoca. Kuvunyiwe ukuba kusetyenziswe abantu abadala abane-BMI ye-27 okanye ngaphezulu (obuninzi ngaphezu komzimba) kwaye obuncinane ubunzima obunxulumene nesisindo ezifana nokunyuka kwegazi (i-blood pressure), okanye i-cholesterol ephezulu (i-dyslipidemia). Nangona kunjalo, nayo inokuba nemiphumo emibi. Nje ngezantsi: